Plain ịkụ azụ lure igbe Manufacturers & Suppliers - China Plain ịkụ azụ lure igbe Factory
Igbe nchekwa transperent dị elu nwere elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ centimita iri, ebe nchekwa ahụ dịkwa ike karị. Ntughari uzo a na enyere gi aka ihu ihe di n’ime ya nke oma. Mere nke BPA - ihe plastik na - akwụghị ụgwọ, gburugburu ebe obibi dị mma na inogide.
Yellow Series N'èzí Fishing Box
Usoro edo edo nke igbe akụ akụ na-abụ nke ejiri ihe siri ike, sie ike ma sie ike. Multi-cell imewe na-eme ka ọ dị mfe na-echekwa. Agba translucent na-eme ka a mata ngwa ọrụ dị n’ime. Akwa-edu okporo, obosara ngwa nso. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ịkụ azụ gị n'èzí.
Agba: Piel / odo
Green Fishing Box Piel ngwa Box mbuso agha
Usoro akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke igbe igbe, nchikota akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na transperent agba, dị nso na okike. Ezi uche imewe, mfe na-ebu, mfe iji, enwekwa nkà, na-echebe gburugburu ebe obibi na anwụ ngwa ngwa bụ ndị e ji mara na uru. Ọ ga - agbakwunye ụfụ na njem ị na - egbu.